Umaka: i-copyright | Martech Zone
Maka: ilungelo lobunikazi
Ibhizinisi engisebenza nalo lisanda kufaka isibuyekezo kuTwitter esinekhathuni elihlekisayo elalinophawu lwalo phakathi. Ngamangala ngoba bengingacabangi ukuthi baqashe umdwebi wekhathuni. Ngakho-ke, ngibathumele inothi futhi bamangala… bebeqashe inkampani yezokuxhumana ukuze bazibandakanye futhi bakhulise abalandeli babo futhi bazoyithumela. Ngemuva kwengxoxo nenkampani, bathuka kakhulu ukuthola ukuthi
Yazi Ukusetshenziswa Kwakho Okufanele, Ukudalula kanye ne-IP
UMsombuluko, May 29, 2017 ULwesithathu, May 31, 2017 Douglas Karr
Namuhla ekuseni ngithole incwadi evela enkampanini esibhale ngayo. I-imeyili ibinamandla kakhulu ekufuneni ukuthi sisuse ngokushesha noma yiziphi izinkomba zegama lenkampani ephawulwe kokuthunyelwe kwethu futhi siphakamise ukuthi sixhumane nesayithi labo sisebenzisa ibinzana esikhundleni salokho. Ukusetshenziswa Kwentengiso Yentengiso Ngicabanga ukuthi inkampani kungenzeka yaphumelela esikhathini esedlule ekusebenziseni abantu ukukhipha igama bese bengeza ibinzana - yi-SEO